Meksika: ao amin’ny fanjakan’i Tabasco, mihatra ny « Lalàna Garrote » manameloka ireo mpanao hetsipanoherana · Global Voices teny Malagasy
"Saziana ny fitondrantena izay endrika ara-drariny isehoan'ny zo"
Nandika (fr) i Annie-Laure Folligné
Voadika ny 05 Septambra 2019 16:59 GMT
Polisy meksikàna ampiasaina hanakiviana ireo hetsipanoherana. Sary nopihan'i Sapdiel Gómez Gutiérrez tamin'ny 24 Jona 2016 , nozaraina tao amin'ny Flickr ary nampiasàna ny lisansa Creative Commons CC BY-NC 2.0.
Ny 1 Aogositra 2019, tao amin'ny fanjakàn'i Tabasco [fr] (any atsimo-atsinanan'i Meksika), nanomboka nihatra ireo andiana fanavaozana ny lalàna famaizana ao an-toerana, manameloka ireo hetsipanoherana ary mamely ny fahalalahana maneho hevitra, araka ny lazain'ireo olona afaka nahazo vaovao.
Tabasco dia fanjakana federaly iray, toerana nahaterahan'ny filoha meksikàna, Andrés Manuel López Obrador (fantatra ihany koa amin'ny anarana AMLO). Avy hatrany i López dia nanao fanambaràna nankasitraka ireny fanavaozana ireny, izay nopetahan'ny fanehoankevitry ny daholobe ny anarana hoe « Lalàna Garrote » (lalànan'ny vely kobay).
Vakio koa : Velona fanahiana ireo Meksikàna sasantsasany mahita fitoviana eo amin'ny filohan'i Venezoelà sy Andrés Manuel López Obrador.
Ny « Lalàna Garrote » ao Tabasco dia mandidy fa ireo izay manohintohina ny fivezivezena malalaky ny olona, ny fitaterana na ireo masinina entina manatontosa asa iray na asam-bahoaka dia saziana fampidirana am-ponja sy lamandy.
Ao amin'ny Twitter, ilay fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakàna meksikàna miady amin'ny kolikoly sy ny tsimatimanota, dia nanambara tao anaty fanehoankevitra iray hoe :
Ny #LalànaGarrote ao Tabasco, natosiky ny @PartidoMorenaMx, dia manimba ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fisehoan-kevitra, nefa ireo no singa fototra ao anatin'ny firenena iray demaokratika.
Maninona no tena mahasarika be ny saina ireny fanavaozana ireny?
Ny fanjakan'i Tabasco no toerana iray tsy maintsy hanorenana ny toby fanadiovana solika Dos Bocas, sy ny seranam-piaramanidina Santa Lucia (kilaometatra vitsivitsy miala ny renivohitra meksikàna) ary ny Train Maya (na ny lalantsara mamakivaky ny tapany atsimo amin'ny firenena), izay isan'ireo tetikasa goavambe an'i Lopez nampanantenainy ny vahoaka meksikàna. Raha ny momba ny tetikasa Dos Bocas, ny mety ho tombony sy ny ho fahaveloman'ilay tetikasa dia naverina noresahana lalindalina kokoa niaraka tamin'ireo manampahaizana manokana. Tetsy ankilany, manamarika ny gazety fa ireo ampahany voalohany tamin'ny asa dia nankinina tamin'ireo mpandraharaha sy orinasa efa niharan'ny sazy tany aloha (na efa nosakanana) noho ireo tsy fahatomombanana goavana hita tamin'ireo toeram-panorenana hafa nandraisan-dry zareo anjara.
Yeidckol Polevnsky nanamafy fa te-hisoroka ny “fampitambazana” ; ho an'i AMLO indray, tsy hisy hanakana ny Dos Bocas ao Tabasco ; ho an'ny Amnesty International, tonga eo amin'ny teboky ny fanasaziana ny zo maha-olona.
Manome vaovao momba ireo fanavaozana ilay gazety an-tambajotra Expansión :
Tao anatin'ny fotoana izay ikarakaran'ny governemanta federaly ny fanorenana ny Train Maya sy ny toby fanadiovana solika ao Dos Bocas indrindra no napetraka ireny fanovàna ireny. Momba io, nolavin'i Andrés Manuel López Obrador tamin'ny Alatsinainy teo ny hoe ny fametrahana an'ity lalàna ity dia ikendrena hanakonana ny tsy hafaliana aterak'iretsy asa voalaza etsy aloha.
Talohan'ny naha-filoha azy, fony izy mbola tany amin'ny fanoherana, nitarika fanaovana sakana an-dàlambe maro i López. Tsaroana amin'izany ny tao amin'ny lalambe Paseo de la Reforma [fr] ao amin'ny renivohitra meksikàna, izay nanakana olona an'aliny maro tsy ho afaka nivezivezy malalaka sy niteraka fatiantoka peso an-tapitrisa maro ho an'ireo mpivarotra misehatra ao amin'io faritra io, iray amin'ireo tena be mpivezivezy indrindra ao amin'ny firenena.
Ireo mpanao lalàna tsy isan'ireo ao anatin'ny antoko manjakazaka dia nampahatsiahy ihany koa hoe i López no naka ny vovo fakàna solitany tao Tabasco, toerana nahaterahany, araka ny tatitry ny gazetiboky Forbes :
Anatin'ity raharaha ity, ilay ramatoa loholona Kenia López Rabadán, avy amin'ny PAN [Parti action nationale [fr]], filohan'ny kaomisôna momba ny zo maha-olona ao amin'ny Antenimieran-doholona, dia nanamafy fa miha-voafetra sy voasazy ny zo hanohitra ananan'ireo Meksikàna.
Nampahatsiahiviny fa raha tamin'ny 23 taona lasa io lalàna io no nampidirina hanan-kery, fony ny filoha Andrés Manuel López Obrador nibodo vovo fakàna solitany sy nanitsoka azy ireny mba ho fitaovam-panoherana, mety ho voasazy izy. Satria efa nataony in'efatra, raha sazy 13 taona an-tranomazina isaky ny mandeha no ampiharina, dia « mihoatra ny 50 taona rehefa atambatra », hoy izy nikajy.
José Ramón Cossío, minisitra efa misotro ronono, nisahana ny Fitsaràna Antampony, dia naneho hevitra tao anaty matoandahatsoratra iray momba ny fankatoavana ireny fanavaozana ireny:
Mametraka olona roa goavana ny hetsiky ny governemanta ao Tabasco izay mikendry ny hamepetra ireo hetsipanoherana sôsialy. Voalohany, ary ny tena mivandravandra indrindra, dia ny maha araka ny lalampanorenana azy na tsia. Saziana ny fitondrantena izay fanehoana ara-drariny ny zo (…)
Ny faharoa, ary ny tena ratsy indrindra ao anatin'ilay tolotra nataony, dia ny fanamafisana ny teny baikon'ny fanjakana manoloana ny zo. Manafina rafi-pisainana diso izy io : ireo zo sy ny fitaovana fiarovana miaraka aminy dia afaka tsaraina miainga avy amin'ny maha-manarapenitra azy na ny tsy fifanarahan'izy ireny amin'ny tanjon'ny governemanta. Raha metimety amin-dry zareo ilay fotokevitra, dia tsara ara-môraly izany; raha toa ka fotokevitra tsy mifanaraka, na mametraka sakana, dia tsy mety izany. Ny fanomezana alàlana ny filoha sy ny governemantany hamaritra ny maha-ara-môraly ny lalàna, dia famelàna azy ireo handray fanapahana momba ny fepetram-piainantsika araka izay itiavan-dry zareo azy.
Notaterin'ny gazety La Jornada tao anatin'ilay dikany vaovao ety anaty tambajotra fa vonona ny hiaro ny maha-ara-drariny an'ilay « Lalàna Garrote » ny governemanta ao Tabasco.
Aza afangaro !
Tsy mitovy ireo fanavaozana natao vao haingana amin'ny lalàna famaizana ao Tabasco sy ny lalàna Helms-Burton (ao Etazonia), navoaka tamin'ny 1996, izay ny tanjona dia — araka ny lazain'ny media ôfisialy Granma — « hanamafisana ny fahirano ara-toekarena, ara-bola ary ara-barotra atao amin'i Kiobà, hanakendàna ara-toekarena ny Revôlisiôna ary hamongorana ny sosialisma ».
Ity lalàna amerikàna mivoaka ny faritra ity, nomen'ireo mpanohitra azy ny anarana hoe « lalàna Garrote », anefa dia tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ireo fanavaozana ny lalàna famaizana ao amin'ny fanjakan'i Tabasco izay resahana ato anatin'ity lahatsoratra ity.